Sheekh Almuxadith Muxamed Ibnu Aadam Al-itoobi | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Taariikhda Sheekh Almuxadith Muxamed Ibnu Aadam Al-itoobi
Muxadithkan magaciisa waxaa la yidhaah: Muxamed ibnu Seekh Cali ibnu Aadam ibnu Musa Al-ethiopi . Imaamkani asalkiisu waxuu kasoo jeedaa dalka Ethiopia ,qabiil ahaana waa Amxaaro gaar ahaan Walow qolada layidhaah. Waxuu dhashay taariikhdu markay ahayd 1366hj, waxuuna ku dhashay oo ku soo barbaaray isla dalkaas (Ethiopia).
Muxadithkani waxuu cilmiga ka qaatay culima badan oo dalkiisa joogay, waxaana kamid ah aabahii. Waxuu xifiday kutub badan oo mutuun ah. Kutubtuu xifiday waxaa kamid ah: Afiyatu Maalik, Suyuudi alfiyadiisa usuulka iyo tan Musdhalaxa. Waxuu ahaa imaamkani mid dhex mushaaxay culuum kala duwan sida: Naxwe, sarfi, balaaqha, mandaq, Xadiith, Fiqhi iwm.
Aabihii < Calaamah Cali ibnu Aadam. (Waxuu ku dul akhriyay aabahii kutubta caqiidada ee dalkooda laga akhriyo iyo kutubta axnaafta sida: “مختصر القدوري” iyo “شرح كنز الدقائق للعيني”, sidoo kale kutubta usuul fiqh-higa , kutubta xisaabta iwm). Cilmigiisa badankiis waxuu kasoo qaatay Aaabahii Raxmatullahu calayhi.
Sheekh Muxamed Sacad ibnu Sheekh Ad-darri. (Sheekhan oo ah sheikh naxwiyahan ah ayaa Muxadithku uu kasoo qaatay culuum dhawr ah sida: Naxwe, sarfi, balaaqa, mandiq, Usuul fiqhi iwm).
Sheekh Cabdilbaasit ibnu Muxamed ibnu Xasan Al-ethiopi Al buwrani Alminasi . (Sheekhan oo ah sheikh naxwi ah ayaa imaamku waxuu kasoo qaatay culuum badan kuwaas oo isugu jira, Musdhalaxul xadiith, naxwe iyo usuul fiqhiba).
Sheekh Muxamed Zeyd Ibnu Muxamed Alitiyoobi. (Sheekhan waxuu ku dul akhriyay Saxiixul Muslimka badankiis oo leh sharxiga Imaam Nawawi, sidoo kale Sunanka Bayhaqi bilowgiisa. Sidoo kale Jawharul maknuun fil balaaqha iwm).
Sheekhu aad ayay u badanyahiin culimada uu ka qaatay cilmiga. Sheekha taariikhdiisa iyo culimadiisa qaar waxaad ka heli kartaan kitaabka uu Muxadithku alifay ee la dhaho “مواهب الصمد لعبده محمد”
Duruustuu bixiyo iyo Ardaydiisa:
Imaamku waxuu usoo safray dalka Sacuudiga, ilaa hadana wuu ku suganyahay. Waxuuna duruus ka bixiyaa “Daarul Xadiith”. Muxadithku waxuu leeyahay arday aad u fara weyn, ardaydaas oo kasoo wada baxay Daarul Xadiith. Waxayna ka kala yimaadeen aduunka daafyahiisa.
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (Waa 40 Mujalad)
قرة عين المحتاج في شرح مقدمة مسلم بن الحجاج ( Waa 2 Mujalad)
إسعاف ذوي الوطر في شرح نظم الدرر” ألفية السيوطي” ( Waa 2 mujalad)
لجوهر النفيس في نظم أسماء ومراتب الموصوفين بالتدليس
تذكرة الطالبين في ذكر الموضوع وأصناف الوضاعين
Culimadu waxay ka dhaheen:
– Imaam Albaani Raxmatullahi calayhi mar uu ka hadlayay kitaabka muxadithka ee la yidhaahdo (ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) kitaabkan oo ah sharax Sunanu Nisaa’i . Waxuu yidhi imaamku “ma arag Sunanu Nisaa’i oo la sharxo kan mid lamid ah”.
– Isla kitaabka waxaa amaanay Muxadith Muqbil ibnu Haadi raxmatullahi calayhi waxuuna yidhi “Waxuu u qaab egyahay Fatxul baariga ibnu Xajar, waxaan kula talin lahaa arday welba inuu ku dhago kitaabkan weyn, runtii wuu yaryahay muxadith casrigan jooga oo la yimaada sharaxan oo kale”.
Ilaahay swt sheekha cilmigiisa ha u barakeeyo, cimrigiisana hawgu dhameeyo Ilaahay ka cabsi. Wanaaga uu umadda iyo Islaamka u qabtayna Miizaankiisa xasanaatka haw saaro aamin.
from → Muxadithiinta Casrigan Noolaa/nool, Sheekh Almuxadith Muxamed Ibnu Aadam Al-itoobi
← Culimada Isku magaca eg!
Sheekhah Kaamilah Alkuwaariy →